Akhriso Faa.idada Ku Jirta Isticmaalka Xulbada.. -
HomeArimaha bulshadaAkhriso Faa.idada Ku Jirta Isticmaalka Xulbada..
Akhriso Faa.idada Ku Jirta Isticmaalka Xulbada..
July 28, 2018 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Mudo hada laga joogo ayan u tagay dhakhtar lafaha ah wuxuu igu yidhi waxaa ka dhamaaday dhareerka lafta dhabarka hadii aan qalniin kugu sameyno waxaa laga yabaa in aan ku guleysano ama inaad sariir ku aruurto oo aadan ka kicin.
Waxaan go,aan saday in aan iskaga tago si aan qatar u galin nafteyda, in mudo ah ayan adkeysanyey oo xanuunka maalinba maalin ayuu ka sii dareyey waxaan la kulmay nin odey ah oo aan u sheegay in u dhabarka i xanuunayo,isla markii odeyga wuxuu igu yidhi adeer cab xulbad ayada ayaa ku caawineysa.
Waxaan qaatay taladii u i siiyey adeer maalintii ayan bilaabay in aan cabo xulbadda iyo waxyaabo kale oo aan ku darsan jiray sida toonta , sanjabiisha iyo timirta.
Ilahay subxanallah watacalaa waa igu caafiyey xulbadii oo wagii ayaa igu danbeysay dhabar xanuun.
Maxay faaido ledahay xulbadda ?
Xulbadda waa miro faaiidooyin badan leh,waxaa ka buuxa proteino iyo nafaqooyin kala gadisan sidoo kale xulbadda waxaa ku jirta maada la yiraado Phosphorus oo ah maado muhiim u ah jidhka waxay hoos u dhigtaa xanuunda sidoo kale waxay korisaa lafaha,maada Phosphorus waxay ka hortagtaa in lafaha isku dhacaan (osteoporosis) .
Cilmi baaris lagu sameyey xulbadda waxaa lagu ogooday halkii qaado in ay ku jirto
– 6000 Milligram oo carbohydrate ah
– 4400 Milligram oo borotiin ah
– 900 Milligram oo dufan ah
– 395 Milligram oo calcium ah
– 51 Milligram oo foosforas ah
– 1.93 Milligram oo bir ah
– Energy u dhigmo 49 Kilocalories
Maxay daweysaa xulbadda ?
1-Xulbadda waxay kor u qadaa cuna qaadashada
2-Xulbadda waxay hoos u dhigtaa subag xun cholesterol
3-xulbadda waa xanuun baabiye
4-xulbadda waxay kor u qadaa hamiga ragga
5-xulbadda waxay siyaadisaa caanaha naaska
6-xulbadda waxay u fiicantahay dadka neerfa xanuunka qaba
7-xulbadda waa ka hor tage kancerka
8-xulbadda waxay la dagaalantaa jeermiska
Qabkee loo sameyaa ?
1-Xulbadda waxaa loo sameyn karaa lab qeybood mid waa in aad kar karisaa kadibna in aad cabtaa biyaha aad ka miirta.
2-miraha xulbada la dhig biyo ilaa 12 saac iyo kabadan kadibna waxaad kula shidaa 1 xabo oo toon ah ,kula dar biyaha sanjabiil ah,kula dar 3 xabo oo timir ah kadibna kula shiid caano geel ama caano lo,o kadibna kala miir oo waxaad cabtaa caanaha.
NB:Xulbada lama siin karo hooyo uur leh sababtoo ah xulbadda waxay soo aruurisaa minka
W/Q :Dr cadceed